Kuvakazve Kufamba: World Tourism Network inoona nguva yave ikozvino | WTN
Location: musha » Kutumira » Wtn » Kuvakazve Kufamba: World Tourism Network inoona nguva yave ikozvino
World Tourism Network nebhodhi rayo rinoshuvira kuzivisa pasi rose kuti WTN yakamira nekwainoenda uye indasitiri yekufambisa uye yekushanya pasi rose mukubatsira kuti kufamba kusvike kune vese.
Mutungamiri weWTN Dr. Peter Tarlow vakaburitsa chirevo chinotevera:
World Tourism Network inoti zvakakosha kuti indasitiri yekufambisa neyekushanya ishande pamwe chete kugadzira uye kutaurirana pamwe chete chigadzirwa chakachengeteka chekufamba.
WTN inoshuvira kutaura kuti kufamba ikodzero yemunhu uye mushure memakore angangosvika maviri akazara ehubernation yave nguva yekuti indasitiri ishande pamwe kutangazve kufamba nekushanya uye kuti pasi rose ribatane sechimwe mukugadzira kufamba kwakachengeteka uye kwakachengeteka.
Yave nguva yekuratidza nyika, kufamba, uye kushanya zvinogona kushanda zvakare zvakachengeteka.
WTN inosimbisa kukosha kwekushandisa kwakaringana chenjedzo dzekurapa dzakaita sekubaiwa, kupfeka masiki akakodzera, uye kuterera kune zvitsva zvekurapa.
WTN iri kudaidzira kuhurumende dzese neUnited Nations kuti dzichengetedze mukana wepasi rose wekudzivirira, uye bvunzo. Nyika ino yakachengeteka chete kana munhu wese akachengeteka.
WTN iri kudaidzira hurumende kuti dziparadzanise mazano ekufambisa zvine chekuita neCOVID nezvimwe.
WTN iri kudaidzira kuhurumende dzese nevatori vechikamu kuti vabatanidze COVID chengetedzo zvinodiwa pakufamba, zvisinei nekuwanikwa kwepasirese, dunhu, kana kumusha.
WTN iri kudaidzira kuhurumende dzese kuti dzigadzirise zvinodiwa zvichienderana nechiyero chakatarwa chekuwana mahotera, maresitorendi, nzvimbo dzemisangano, nezvimwe.
WTN iri kudaidzira kuhurumende dzese kuti dzigadzirise humbowo hwekudzivirira uye bvunzo pasi rose.
Dr. Tarlow akawedzera kuti: “World Tourism Network inogara yakagadzirira kubatsira nyika nevemabhizimisi kuwana nzira dzokuti kushanya kukwanise kutungamirira mukumutsiridza upfumi uye ramangwana rakajeka.”
The World Tourism Network (WTN) izwi rakareba kwenguva refu remabhizinesi madiki uye epakati-saizi ekufamba uye mabhizinesi ekushanya pasirese. Nekubatanidza kuedza kwedu, tinounza pamberi pezvido nezvishuwo zvemabhizinesi madiki nepakati uye neVabatiri vavo.
World Tourism Network inobata kuvaka.travel hurukuro. Hurukuro yekuvakazve.yekufamba yakatanga munaKurume 5, 2020, padivi peITB Berlin. ITB yakabviswa, asi kuvaka.travel yakatangwa paGrand Hyatt Hotel muBerlin. Muna Zvita rebuilding.travel yakaenderera mberi asi yakaumbwa mukati mesangano idzva rinonzi World Tourism Network (WTN).
Kuvakazve Kufamba jtakagadzira akati wandei ekufunga tangi mapoka ekukurukurirana paWhatsApp, Telegraph, uye Linkedin. Nhengo dzeWTN vanokurudzirwa kujoina.
Rumwe ruzivo nezve WTN: www.wtn.travel
Rumwe ruzivo rwekuvaka patsva nhaurirano yekufamba: www.rereiting.travel
Dzvanya kuti ubatane neWorld Tourism Network uye Kuvakazve Kukurukurirana Kwekufamba
Zvimwe zvekuvhara paWorld Tourism Network
Kuwedzera kufukidzwa pakuvakazve kufamba
Covid hotera Hyatt ushanyi United Nations Wtn